MAHAJANGA : Nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny mpanjifa tao amin’ny ex don Bosco
Tao amin’ny ex don Bosco no nanasan’ny tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa sy ny mpikambana ao aminy ny tompon’andraiki-panjakana sy ny vahoaka. 20 mars 2017
Nisy ny valandresaka narahina adihevitra momba ny lalàna mifehy ny fifaninanana ara-barotra, ny fahalalahana ara- toekarena ary ny fiakaran’ny vidim-piainana. Ny sabotsy teo izany no natao satria andro iasana ny 15 marsa no ankalazaina izany andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny mpanjifa izany. Marihina fa mpilatsaka an-tsitrapo avokoa ireo mpikambana ao amin’ity tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa ity.
Miezaka hatrany izy ireo manelanelana sy mitady vahaolana amin’ny olan’ny mpanjifa. Efa betsaka ireo tompon’andraiki-panjakana no miara-miasa amin’izy ireo ka nahitam-bokatra izany tamin’ny fanaraha-maso ireo mizàna ampiasaina eny an-tsena. Ny fanaraha-maso ihany koa ireo sakafo tsy ara-pahasalamana amidy... tsy ireo ihany fa ny olan’ny delestazy sy ny Jirama ary ireo ady tany marobe eto Mahajanga.
Tato anatin’ny volana vitsivitsy dia ny fidangan’ny vidim-bary no tena nitadiavan’izy ireo vahaolana. Mbola tsy voavaha anefa ny olana hatreto, indrindra fa mila mitandrina mafy izy ireo. Mora ho an’ireo voakasika tombontsoa mantsy ny mitory fa nahazo vola ny tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa, indrindra ny filohany. Marihina fa efa voaantso tany amin’ny Bianco i Gabin noho ny raharaha ady tany teny Antanimasaja avaratra ka ilay olona efa nofoanan’ny Kaominina ny fanomezana azy ny tany noho izy tsy mahafeno fepetra, nefa mbola afaka nandroaka ireo tena nanao fanamaintisamolaly, indray no nitory...
Tsy mora ny asan’izy ireo satria betsaka amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny no mampiasa ny lalàna araka ny tombontsoany manokana fa tsy mijery intsony ny rariny sy ny hitsiny.